5 Proven Times yekutumira Yako Akazvimirira Emails | Martech Zone
5 Proven Times Yekutumira Yako Akazvimirira Emails
Chipiri, Mbudzi 24, 2015 Muvhuro, Mbudzi 23, 2015 Douglas Karr
Isu tiri mafeni makuru ema automated maemail. Makambani haawanzo kuwana zviwanikwa zvekubata tarisiro yega yega kana mutengi kazhinji, saka otomatiki maemail anogona kuve nemhedzisiro inokanganisa pakukwanisa kwako kutaurirana nekurera zvese zvaunotungamira uye vatengi. Emma akaita basa rakanakisa mukukwevera pamwe iyi infographic pamusoro 5 anonyanya kushandisa maemail kutumira.
Kana iwe uri mumutambo wekushambadzira, iwe unotoziva kuti otomatiki ndiyo kiyi yekuwana vateereri chaivo panguva yakakodzera. Asi iwe unoziva here kuti ndeapi ma automated maemail anokuwanisa iwe yakanyanya kubhangi yako yekushambadzira buck?
Rini uye Nei Tumira MaAmail Akazvimiririra
Gamuchira Maemail ari makumi masere neshanu muzana anoshanda kupfuura akajairwa tsamba tsamba.
Kurera Emails gadzira 47% yakakura yekutenga kupfuura isingasimudzirwe mafambiro.
Ndatenda maemail gadzira ka13 mari yakawanda kupfuura inoshambadzira tsamba.
Maemail Ekuzvarwa simudza shanduko yemitengo ne60% pamusoro peimwe tsamba dzinopihwa zvakafanana.
Dzorerazve maemail fambisa zvakanyanya kubatanidzwa, 45% yevanogamuchira verenga inotevera meseji.
Nepo vanhu vazhinji vachitenda kuwanda kweemail kutaurirana kunogona kukanganisa maitiro ako ekutengesa, otomatiki mameseji senge aya haawanzo kugadzikwa muhuwandu. Izvo zvinogona kudzikisira mikana yako yekumhanyisa muzvinhu zvekugadzirisa. Uye sezvo ivo vakasarudzika uye nenguva, vanogona kuwedzera kubatanidzwa zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti kuvhura kwakawanda, zvirinani kubaya-kuburikidza nemitengo uye shanduko.
Tags: zvoga emaimerikushandisa michinamaemail ekuzvarwamwero wekushandurwaemail kushandisa michinaemail kutendeuka mweroemail yakazaruka mweromyemakuchengeta maemailchiyero chakavhurikamitero yakazarukazvakare-kubatanidza maemailndatenda maemailgamuchira maemail
Iyo Nyika yeSocial Media Ecommerce
Mashandisiro anoita Mobile Wallet Dhiraivha Kutengesa
Nov 26, 2015 na5:47 AM
Ndatenda nemazano! Ndichachengeta izvozvo mupfungwa nguva inotevera ndiri kushandisa GetResponse.